भेटेरिनरि Archives – healthykhabar.com
बेइजिङ,३० साउन । कुखुराको मासुमा कोरोना भाइरस भेटिएको छ। ब्राजिलबाट चीनको शेन्जेन आयात गरिएको फ्रोजन गरिएको कुखुराको पखेटामा कोरोना भाइरस भेटिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। आयातित खाद्यवस्तुको स्क्रिनिङका क्रममा बुधबार कुखुराको पखेटाको पनि नमुना लिइएको थियो। सीएनएनका अनुसार शेन्जेन प्रान्तको लंगाङ जिल्लामा लिइएको सो नमुनामा कोरोना भाइरस भेटिएको हो। बिहीबार एक भनाइ जारी गर्दै नगरपालिकाले यसबारे जानकारी दिएको हो। हालसम्म कुनै पनि खाद्यवस्तुबाट कोरोना सरेको प्रमाण पाइएको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले खाद्यवस्तुबाट कोरोना सर्ने सम्भावना निकै कम रहेको बताएको छ। यसैबीच शेन्जेनका स्वास्थ्य अधिकारीले कुखुराको मासु आयातमा संलग्न सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेको छ। उनीहरू सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको नगरपालिकाले जारी गरेको भनाइमा उल्लेख छ। साथै पखेटा भण्डारण गरेर राखेको स्थानलाई डिस्इन्फेक्सन तथा बेचिसकेकाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। एजेन्सी
कुकुरलाई खुला ठाउँमा शाैच गराउदै हुनुहुन्छ ? होशियार ! महानगरले कारबाही गर्ला?
काठमाडौं,७ भदौ । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरपालुवा कुकुरलाई सार्वजनिकस्थलमा शौच गराउनेहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ। यसअघि पटकपटक अनुरोध गरे पनि ककुरलाई बाटो, पार्कलगायत क्षेत्रमा शौच गराउने क्रम नरोकिएपछि महानगरले कुकुरधनीलाई कारवाही गर्ने गरी तयारी गरेको हो। महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले कुकुरलाई सार्वजनिकस्थलमा नभई घरैमा सुरक्षित ढंगबाट शौच गराउन आग्रह गरेको छ।कुकुरको दिसापिसावबाट मानव जीवनमा गम्भीर प्रकारको रोग निम्त्याउने भएकाले घर पालुवा कुकुरलाई घरमै शौच गराउन आग्रह गरिएको कामपाका वातावरण व्यवस्थापन विभागले जनाएकाे छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा करीब ८० हजार घरपालुवा र २२ हजार सामुदायिक कुकुर रहेको अनुमान छ। कुकुरको एक ग्राम दिसामा दुई लाख ३० हजार फिकल कोलिफर्म ब्याक्टेरिया हुने बताइन्छ। कुकुरको दिसाबाट ह्विप वर्म, हुक वर्म, राउन्ड वर्म, टेप वर्मजस्ता जुकाका अण्डा मानिसको शरीरमा प्रवेश गर्ने बताइन्छ। कुकुरको शौचबाट आउने ब्याक्टेरियाले मानिसलाई गम्भीर प्रकारको रोग लाग्ने चिकित्सक बताउँछन्।
कुकुरले टोकेको नभन्दा रेबिजले युवतीको ज्यान गयो
ललितपुर,३० साउन । कुकुरले टोकेको कुरा लुकाउँदा ललितपुरमा एक किशोरीको मृत्यु भएको छ। गोदावरी नगरपालिका–६ स्थित नेपाल असहाय बाल घरमा बस्दै आएकी १७ वर्षीया मनिषा अर्यालको साउन १९ गते मृत्यु भएको हो। सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीकी उनी १२ कक्षामा पढ्थिन्।जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख खगेश्वर गेलालका अनुसार अर्यालका बाआमा कपनमा बस्छन्। जेठ १८ देखि २५ गतेसम्म उनी बाआमा भेट्न गोदावरीबाट कपन गएकी थिइन्। त्यहीबेला उनलाई कुकुरले टोकेको थियो। तर उनले यो कुरा कसैलाई बताइनन्।कुकुरको टोकाइबाट घुँडाभन्दा पछाडि थोरै मात्र घाउ लागेको थियो। केही दिनमा उनको घाउ निको भयो। साउनसम्म कुनै समस्या देखिएन। साउन १४ गते उनलाई महिनावारी भयो। महिनावारीको समयमा ढाड दुखेके बताएकी थिइन्। दुखाइ बिस्तारै कम्मरदेखि तलको भागमा फैलियो। अन्त्यमा सास फेर्न नसक्ने अवस्थासम्म पुग्यो। गेलालका अनुसार दुखाइ कम नभएपछि उनलाई १७ गते मेडिसिटी अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। अस्पताल लैजाँदा रेबिजको लक्षण देखिन थालेको थियो। बाटोमा गाडीको सिसाबाट हावा छिर्दा डराउन थालिन्। बाथरुममा पानी खोल्दा पनि डराउन थालिन्। गेलालले भने, ‘रेबिजका बिरामीमा…
जिल्ला अस्पतालमा सर्पदंश उपचार सेवा शुरु
कावासोती, २१ साउन । नवलपरासी पूर्वनवलपुरको कावासोती–१६, डण्डामा रहेको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा सर्पदंश उपचार सेवा शुरु गरिएको छ । सामुदायिक अस्पतालको रुपमा रहेको अस्पताललाई जिल्ला अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएसँगै यहाँबाट सर्पदंशको उपचार सेवा थप गरिएको हो । नवलपुरमा सर्पदंशका बिरामी धेरै हुने गरेकाले गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्पदंश उपचार सेवा केन्द्र निर्माणका लागि बजेट विनियोज गरेको थियो । मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश सरकारबाट रु ४० लाख सर्पदंश उपचार केन्द्र निर्माण तथा सेवा शुरु गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा गोपाल खनालले बताउनुभयो । हाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षबाट सर्पदंशको उपचार सेवा शुरु गरेको अध्यक्ष डा खनालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशबाट प्राप्त बजेटबाट सर्पदंश कक्ष स्थापनासहित उपचारका लागि जनशक्ति तयार गर्न तालीम प्रदानलगायतका कार्य गरिनेछ । हाल अस्पतालमा रहेको चिकित्सकलाई तालीम प्रदान गरी सर्पदंश उपचार सेवा शुरु गरिएको छ । सर्पदंशको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने भेनम जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट माग गरिएको अध्यक्ष डा खनालले बताउनुभयो । अस्पतालमा ५० भायल एन्टि…
मंगलवारे अस्पताल: आकस्मिक कक्षको बेडमा दिनहुुँ कुकुरको बास
मोरङ,१९ साउन।अस्पतालको आकस्मिक कक्षको बेडमा राखेर बिरामीलाइ उपचार गरिन्छ। तर मोरङको एक अस्पतालमा बिरामी होईन कुकुर बसिरहेका हुन्छन् । मंगलबारे अस्पतालको आकस्मिक कक्षको बेडमा दिनहुुँ कुकुर आयर बस्दा पनि अस्पतालले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। चौबिसै घण्टा खुल्ला हुने अस्पतालको आकस्मिक कक्षको बेडमै कुकुरहरु पुग्छन र त्यहिँ सुत्छन भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर कुकुरको विरामी राख्ने बेडमा बिश्रामस्थल हुन्छ । उर्लाबारी–३ स्थित मंगलवारे अस्पतालको आकस्मिक कक्षको बेड सम्मै निर्वाधरुपमा कुकुर पुग्ने मात्र होईन,त्यहाँ पुगेका कुकुर ढुक्कले सुत्छन् । विरामी सुताउने बेडमुनि कुकुरले ‘अड्डा’नै जमाएका छन । स्थानीय सेवाग्राहीका अनुसार अस्पतालको फोहर व्यावस्थापन पनि नियमित हुने गरेको छैन । विरामीलाई झन् विरामी पार्ने फोहर व्यावस्थापन नभएका बेला कुकुर नै विरामी कुर्न आएको भन्दै स्थानीयले हाँसोका विषय बनाइरहेका छन् । केही समयअघि योग्य व्यक्ति भन्दै नगरपालिकाले अस्पताल वयवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष भानु पराजुलीलाई चयन गरेको थियो । वडाअध्यक्षले पनि अस्पताल ब्यबस्थापन गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ। सो…
सिरहा ७ साउन । कमला नदीको पूर्वी तटीय क्षेत्रको डुबानग्रस्त स्थानहरूमा अहिले विषालु कीराको प्रकोप बढ्न थालेको छ । गत असार २७ र २८ गते कमला नदीमा आएको बाढीले पूर्वी तटमा पर्ने सिरहा नगरपालिका–६ र १२ को बसबिट्टा तथा सारस्वरमा रहेको सिंचाईको कल्भर्ट भत्काएपछि सिरहाको सारश्वर, बेल्हा, गम्हरिया, कठ्खोल्वा लगायतका वस्तीहरू डुबानमा छन् । ती क्षेत्रहरूमा अहिले विभिन्न किसिमका विषालु कीराको प्रकोप बढ्न थालेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका अनुसार, डुबानग्रस्त क्षेत्रमा मात्रै मङ्गलबारसम्म विषालु सर्पको डसाईबाट दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु हुनेमा सारस्वरकी ५ वर्षीया सन्ध्या कुमारी साह र कर्जन्हा नगरपालिका–१ स्थित बन्दीपुर बस्ने २३ वर्षीय तिलक बराल रहेका छन् । लगातारको वर्षा र बाढीका कारण माथिल्लो भागबाट सर्प बगेर आउने तथा दुलोभित्र रहेका सर्प पनि जमिन बाहिर आउने भएकाले प्रकोप बढेको सिरहा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. नागेन्द्र यादवले बताउनुभयो । जिल्ला अस्पतालमा मात्र बाढीयता ५० जनाभन्दा बढी सर्पदंशका बिरामी आएको बताइएको छ । बाढीपछि दैनिक…
तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएकोमा चिकित्सक संघको आपत्ति, जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप
काठमाडौं,२४ असार। नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले विदेशबाट आयातित तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। जनताको स्वास्थ्यमा आफैं गम्भीर भई लाग्नुपर्नेमा सरकारले आफैंले गरेको निर्णय फिर्ता लिएर जनताप्रतिको विश्वासमाथि कुठाराघात गरेको संघको आरोप छ। मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३९ मा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरका लागि उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणलाई गुणस्तर र स्वस्थ बनाइने उल्लेख गरिएको स्मरण गराएको छ। संघका महासचिव डाक्टर लोचन कार्कीले ऐन कानून विपरीत मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको गुणस्तर परीक्षणका लागि सरकार आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाएका छन्। नेपाल सरकारको ऐन कानून विपरित मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पुग्ने अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको गुणस्तर परीक्षणका लागि सरकार आफै जिम्मेवार हुनु पर्नेमा आफैले गरेको निर्णयलाई फिर्ता लिएर जनताप्रतिको विश्वास, आशा र भरोसामाथी कुठाराघात गरेको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ । बिषादी फलपूmल तथा तरकारीको सेवनले मानव शरीरमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन समस्याहरु देखा पर्न सक्दछन् ।…
प्रदेश १ सरकारले भारतबाट आयात तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने
असार २३- प्रदेश १ सरकारले विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारले भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय गरी आलोचना खेपिरहेको बेला प्रदेश १ सरकारले विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रदेश १ सरकार भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अगुवाइमा बिरानगरको रानीमा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्न प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको हो । सरकारले काठमाडौँबाट प्राविधिकसहितको टोली ल्याएर प्रयोगशाला स्थापना गरेको हो । सोमबारदेखि नै उक्त प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउँने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अब तरकारी तथा फलफूलमा विषादी प्रयोग भए नभएको यनिक गर्न तरकारी तथा फलफूल परीक्षण गर्न गराउँन सबैमा जानकारी समेत एक सूचनामाफर्त जानकारी गराईएको छ । करिब २५ लाख लागतमा सञ्चालन भएको प्रयोगशालाबाट अब विषादी परीक्षण हुनेछ ।
हेटौंडा उपमहानगर बर्डफ्लुमुक्त घोषणा
हेटौँडा, ११असार । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई बर्डफ्लुमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।यसअघि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ७ को नागस्वती र वरपरको क्षेत्रलाई बर्डफ्लु रोग सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको असार ९ गतेको मन्त्रिस्तरको निर्णयले हेटौँडा–७ नागस्वती क्षेत्रलाई बर्डफ्लु रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । हेटौँडा–७ नागस्वतीका कुलप्रसाद चौलागाईंको कमर्सियल लेयर्स फर्म र वरपरको कुखुरा फर्ममा पालेका कुखुराको नमुना जाँचपछि बर्डफ्लु रोगको सङ्क्रमण भएको केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरले गत फागुनको अन्तिम साता पुष्टि गरेपछि सो क्षेत्रलाई बर्डफ्लु रोग सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । बर्डफ्लु रोगका कारण हेटौँडा–७, ६ र १६ नम्बर वडाका विभिन्न स्थानमा गरी दुई लाख ८९ हजार कुखुरा मरेका थिए । तीमध्ये बर्डफ्लु सङ्क्रमण भएका ६८ हजार कुखुरा नष्ट गरिएको थियो । बर्डफ्लु लागेका कुखुरा नष्ट गरेसँगै करिब साढे तीन महिनाको निरीक्षणपश्चात् मकवानपुरलाई बर्डफ्लु रोग सङ्कटग्रस्त क्षेत्र फुकुवा भएको घोषणा गरिएको हो । पशुसेवा विभागका महानिर्देशक…
रसुवामा भेटियाे बर्डफ्लु, नाैकुण्ड गाउँपालिकाकाे भाेर्ले संकटग्रस्त क्षेत्र
रसुवा,११असार । जिल्लामा बर्डफ्लु भेटिएपछि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। जिल्लाको नौकुण्ड गाउँपालिका ५ भोर्लेमा कुखुराको नमुना परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु भेटिएको हो। स्थानीय रामकुमार थिङ र बुद्धिबहादुर थिङले पालेको कुखुरा फर्मबाट रोगी कुखुराको नमुना परीक्षण केन्द्रीय पशुपन्छी प्रयोगशालामा गर्दा कुखुरामा एच ५ एन १ भेटिएको भोर्ले पशुसेवा कार्यालयले जनाएको छ। नमुना जाँच गरिएको पन्छी र पन्छीजन्य वस्तु नष्ट गर्न डा. तुलसीराम गम्पेको नेतृत्वमा ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ गठन गरी र अन्य आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कन्ट्रोल रूम इन्चार्ज डा. जगतबहादुर सिंखडालाई तोकिएको छ। बर्डफ्लु नियन्त्रण आदेश २०६४ को दफा ६ को १ र २ अनुसार पन्छी र पन्छीजन्य वस्तु नष्ट गर्ने बताइएको छ। यसैगरी बर्डफ्लु भेटिएको क्षेत्रलाई प्रशासनले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको चार किल्लाभित्रका कुखुराको खोर तथा नष्ट गरिएका स्थानमा रोग फैलिन नदिन निसंक्रमणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले जानकारी दिए। रासस
हरेउले डसेर दैनिक डेढ दर्जन बिरामी
हरेउ विषालु सर्प भए पनि मान्छे मार्ने खालको होइन : चिकित्सक काठमाडौँ,७असार।तापक्रम वृद्धि भएसँगै काठमाडौंसहित आसपास जिल्लामा सर्पले डसेर उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीको संख्या बढेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेलगायत जिल्लाबाट दैनिक १८ जनाभन्दा बढी बिरामी शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु आइपुग्ने परेका छन् । यसरी आउनेमा कृषि, रोपाइँ, बगैंचा र झारपातमा काम गर्ने महिलाको संख्या धेरै छ । चिकित्सकका अनुसार यस्ता बिरामी मुख्य रूपले ‘हर्रो/हरेउ’ भनिने ‘ग्रिन पिट भाइपर’ सर्पको डसाइबाट प्रभावित भएका छन् । उनीहरूमा रगत जम्ने प्रक्रियामा अवरोध, सुन्निने, पानी फोका आउने, असाध्य दुख्ने, चक्कर आउने, कमजोरी आदि समस्या देखिने गरिएको छ । टेकु अस्पतालका डा.शेरबहादुर पुनका अनुसार हर्रो सर्पको डसाइ साइटो र हिमोटक्सिक भएकाले यसले शरीरको तन्तु र रगत जम्ने प्रक्रियालाई असर पार्छ, आन्तरिक रक्तश्राव गराउन सक्छ । यसको विषमा हिमो टक्सिक गुण सबैभन्दा बढी हुने भएकाले रक्त सञ्चारमा धेरै असर गर्ने नेचुरल हिस्ट्री म्युजियमका पूर्वनिर्देशक एवं उभयचर र सरिसृप विशेषज्ञ प्रा.करनबहादुर शाहले…
चितवन,६ असार । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको सक्रियतामा शुक्रबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले मकवानपुरका बर्डफ्लुका कारण पीडित किसानलाई राहतस्वरुप अनुदान रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । पशुसेवा विभाग काठमाडौंबाट कृषकलाई यही असार ९ गते हेटौंडामा अनुदान रकम वितरण गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार मकवानपुरका ५४ कृषकलाई राहतस्वरुप क्षतिपूर्तिबापत चार करोड ४२ लाख उपलब्ध गराइने भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ६, ७, ८, १४, १५, १६ र १७ मा गरी ५४ कृषकका फर्ममा गत फागुनको पहिलो सातादेखि बर्डफ्लुको प्रकोप देखिएपछि प्रशासनले कुखुरा नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरेको थियो । सो अभियानअन्तर्गत प्रशासनले विभिन्न समयमा ६६ हजार ५४६ कुखुरा नष्ट गरेको थियो । किसानहरुको कुखुरा नष्ट गर्दा प्रत्येक कुखुराबापत नौ सय चार माग गरे पनि पशु सेवा विभागले भने ६७५ अर्थात् ७५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएको छ । सो रकम प्रकृति जलाशय मत्स्य प्रवद्र्धन एवं संरक्षण कार्यालय हेटौंडाबाट वितरण गरिने कार्यालय प्रमुख सानुकाजी पछाईले…
स्वस्थ जिवनका लागि नियमित दूध पिउने गरौं
कुनै पनि स्तनधारी कुनैपनि स्तनधारी प्राणीका लागि दुध अतिनै आवश्यक पदार्थ हो । अझ मानव जीवनका लागि त झनै महत्वपूर्ण पदार्थ हो । कुनै पनि शिशुका लागि जन्मेको ६ महिना सम्म उसको सम्पूर्ण खानेकुरा भनेकै दुध मात्र हो । अर्थात दुध बाहेक अरु चिज दिन सकिदैन वा हुदैन पनि । बच्चाको उमेर बढदै जाँदा विस्तारै आमाको दुध आउने र बच्चाले खानेक्रम घटदै जान्छ । त्यसको पूर्ति गाई , भैँसी, भेडा, बाख्रा लगायतका जनावरका दुधबाट पूर्ति गर्ने गरिन्छ । दुध ‘माइक्रो न्युट्रेन्ट’ हो , जसले शरीरको सम्पूर्ण बृद्धिविकासका लागि सहयोग पुर्‍याउछ । दुधबाटै शरीरका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटिन, कार्वोहाइट्रेड, फ्याट र मिनरल्स लगायतका तत्वहरु पाइन्छ । शरीरका लागि आवश्यक पदार्थ दुधबाटै पाइने हुनाले नियमित रुपमा दुध पिउने व्यक्ति शारीरिकरुपमा तन्दुरुस्थ र निरोगी हुन्छ । दुधमा पानीको मात्रा निकै बढी हुन्छ । त्यसैले साना बच्चाहरुलाई दुध खुवाएपछि छुट्टै पानी खुवाईदैन । किनकी दुधले पानीको काम पनि गर्छ । १०० ग्राम दुधमा ८७.…
पशु स्वास्थ्यका लागि परजीवी नियन्त्रण आवश्यक
पोखरा,२६ जेठ । पशु स्वास्थ्यमा देखिएको परजीवी प्रकोप नियन्त्रण गर्न सकेमा मुलुकमा पच्चीस प्रतिशतले उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएकोे छ । नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घको चौथो स्थापना दिवसका अवसरमा पोखरा–२० स्थित मौजा आँटीघरमा आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया तथा पशु स्वास्थ्य, बाँझोपन निवारण शिविरमा उक्त कुरामा जोड दिइएको हो । पशुको स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको जुका, चुर्नालगायत विभिन्न खालका परजीवीका कारण उत्पादनमा कमी आउनाका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका–२० का वडाध्यक्ष सिम गुरुङले कृषकहरूलाई पशुका लागि आवश्यक औषधि वितरण गर्र्दै गोठदेखि ओठसम्म शुद्धताको खाँचो आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । व्यावसायिक बाख्रापालनको पकेट क्षेत्रको रुपमा रहेको पोखराको विकट मौजा गाउँका किसानका गोठमा देखिएको पशु स्वास्थ्यको अवस्था र उपचारमा सहयोग गर्न प्राविधिक टोलीलाई आग्रह गर्दै उहाँले त्यसका लागि महानगर र वडास्तरबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मौजा बाख्रापालन कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर गुरुङले गाउँबाट वार्षिक रु ७० लाख बराबरको खसी र बोका बिक्री हुँदै…
निर्माणाधिन अस्पतालको भवन निर्माण गर्न ५ अर्ब ५७ करोड
काठमाडौ,१५ जेठ । निर्माणाधीन अस्पतालहरुको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न रु ५ अर्ब ५७ करोड छुट्याएको छ । आज अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त रकम छुट्याएको हो । यस्तै पन्ध्र सैयाको प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नती गर्न रु १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छ । सबै प्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुरुप कोशी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा र कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाट यस्तो सेवा उपलब्ध हुनेछ ।
तराईमा सर्पदंशको प्रकोप, नारायणी अस्पतालमा मात्र दैनिक १५ जनाको उपचार
वीरगन्ज, ८ जेठ । वीरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा मात्रै सर्पको टोकाइबाट उपचारका लागि दैनिक १५ जना बिरामी आउने गरेका छन् । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा अहिले पर्सा र बारा जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट सर्पको टोकाइका बिरामी आउने गरेका छन् । तराईका जिल्लामा गर्मी बढेसंगै सर्प दंशका घट्ना बढ्न थालेको हो। सबैभन्दा बढी गोमन र करेतको टोकाइबाट सिकिस्त भएका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन । विषालु सर्पको टोकाइबाट सोमबार सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका एकडरवाका १२ वर्षीय सागर साहको मृत्यु भएको छ । केही दिनदेखि अत्यधिक गर्मी बढिरहेका कारण सर्प प्वालबाट बाहिर निस्केर खेतबारी, सडक र कच्ची घरमा समेत पसेर टोक्ने गरेको छ । सर्पले टोकेलगत्तै अस्पताल पु¥याएका केही बिरामीबाहेक प्राय उपचारपछि सकुशल घर फर्किने गरेका छन् भने बढी सिकिस्त परेकालाई तिन चार दिन सम्म अस्पतालमै उपचार गराई रहेका छन् । चिकित्सकले करेत सर्प घरवरपर,घरको छानो, ओछ्यानमा आउने हुनाले सकेसम्म भुईमा नसुत्ने , सुत्दा झुलको प्रयोग गर्ने, रातिमा बाहिर निस्कदा टर्च लिएर…
काठमाडौं,७जेठ । नेपालमा बर्डफ्लुबाट एकजनाको मृत्यु भएपछि उनको नजिक गएका एक सय ७२ जनाको नमुना संकलन गरी सरकारले परीक्षणका लागि जापान पठाएको छ । सोमबार जापानको डब्लुएचओ कोलाबोरेटिङ सेन्टर फर इन्फ्लुएन्जा प्रयोगशालामा नमुना पठाइएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । गत १५ चैतमा काभ्रेका २१ वर्षीय युवकको बर्डफ्लु संक्रमणबाट ज्यान गएको थियो । सोही ल्याबले ती युवकलाई एच फाइभ एन वान भाइरस लागेको प्रमाणित गरेको थियो । सरुवारोग विशेषज्ञहरूका अनुसार बर्डफ्लु भाइरस टाढाबाट सर्दैन । एक मिटरको दूरीमा मात्रै यो भाइरस एकबाट अर्कोमा सर्न सक्छ । ‘त्यसैले हामीले संक्रमित मानिसको नजिक आएका एक सय ७२ जनाको नमुना संकलन गरी जापान पठाएका हौँ,’ महाशाखाका एक अधिकारीले भने । महाशाखाका अनुसार एक मिटरको दूरीमा पनि धेरैपटक आवतजावत भएपछि मात्रै यो भाइरस सर्छ । तर, हालसम्म मान्छेबाट मान्छेमा बर्डफ्लु सरेको छैन । परिवारका ७ र १६५ स्वास्थ्यकर्मीको नमुना संकलन युवक बिरामी भएपछि उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको नमुना संकलन गरिएको छ । जसमा उनको परिवार र आफन्त सातजना छन् भने उनको उपचारमा…
बर्डफ्लुका कारण युवकको मृत्यु भएपछिको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो?
नेपालमा सरकारले हालै बर्ड फ्लुका कारण एकजना युवकको मृत्यु भएको पुष्टि गरेपछि ती युवकलाई त्यो रोग कसरी सर्‍यो भनी अनुसन्धान थालिएकोमा उक्त सङ्क्रमणको कारणबारे अझै स्पष्ट नभैसकेको एक स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एपिडिमिओलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार ती युवकलाई बर्ड फ्लु सर्नुको कारण पत्ता लगाउन केही साताअघि थालिएको अनुसन्धान अझै जारी छ। परिचय गोप्य राखिएका काठमाण्डूको पूर्वी भेग बस्ने भनिएको ती युवकलाई चैत १० गते खोकी र ज्वरो आएपछि अस्पताल भर्ना गरी उपचार थालिएको थियो। तर पाँच दिनपछि श्वासप्रश्वासको समस्याका कारण उनको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यसलाई बर्ड फ्लुका कारण नेपालमा मानिसको मृत्यु भएको पहिलो घटना भनिएको छ। एपिडिमिओलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डाक्टर प्रकाशप्रसाद शाह त्यो घटनाको अनुसन्धानमा सहभागी अधिकारीहरू मध्येका एक हुन्। उनले कसरी बर्ड फ्लुको किटाणु सर्‍यो भनेर केलाउने र अनुसन्धान गर्ने क्रम अझै पनि जारी छ। नतिजा अझै निस्किसकेको छैन।" ती युवक विभिन्न ठाउँमा गएको र त्यसक्रममा…
काठमाडौँ,६ जेठ । केही साता पहिले रामेछाप नामाडीका ४० वर्षीय निरज खड्का टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा रेबिजको उपचार गर्न आए तर अन्तिम अवस्थामा आएकाले उनी बाँच्न सकेनन । गाउँघरको कुकुरले टोकेको के होला र भन्दै बस्नाले खड्कालाई मृत्युको मुखमा पु¥यायो । नुवाकोटका १० वर्षीय बालक सज्जन गिरी केही हप्ता पहिले टेकु अस्पतालको प्राङ्गणमा हाँस्दै लुटुपुटु गर्दै खेल्दै थिए । छेउमै बस्नुभएकी उहाँकी आमा भने निरास मुद्रामा थिइन् । चिकित्सकको परामर्श सुनेपछि छाराको केही दिनभित्रै मृत्यु हुँदैछ भन्ने आमालाई थाहा भयोे । बालकको तीन दिनपछि मृत्यु पनि भयो । छोराको मृत्युको पूर्व जानकारी पाएकी आमाको अवस्था कस्तो हुन्छ, शब्दमा लेख्न सक्ने विषय नै भएन । काठमाडौँका २५ वर्षीय अजय डंगोलको पनि त्यही समय रेबिजबाटै मृत्यु भयो । काठमाडौँको धनी परिवारका डंगोलको घरमा छोराछोरीलाई पालनपोषण गरेझै एउटा कुकुर पालिएको थियो । एक दिन गेट खुला भएपछि एकैछिन कुकुर बाहिर गएको थियो । कुकुरलाई रेबिजको सुई पनि लगाउने गरिएको थियो । एकै छिनपछि…
काठमाडौं ,६ जेठ । बर्डफ्लु संक्रमणबाट पहिलोपटक मानिसको ज्यान गएपछि स्वास्थ्यकर्मी नै प्रभावित क्षेत्रमा जान डराउन थालेका छन् । गत १५ चैतमा बर्डफ्लुका कारण काभ्रेका २१ वर्षीय युवकको मृत्यु पुष्टि भएपछि सर्वसाधारणसँगै चिकित्सक पनि डराएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ ।कुखुरा मार्न र औषधिका लागि खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी पनि हच्किन थालेको महाशाखा प्रमुख डा. विवेक लालले बताए । ‘विगतमा बर्डफ्लुका विषयमा कसैले चासो राख्दैनथे । मानिसकै मृत्यु भएपछि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जानकारी लिनेहरू बढेका छन् । संक्रमित क्षेत्रमा खटिन स्वाथ्यकर्मी पनि असहज मान्न थालेका छन्,’ उनले भने । नेपालमा बर्डफ्लु देखिएको १० वर्ष भएको छ । पहिलोपटक ०६५ मा झापाका कुखुरामा देखिएको थियो । सन् १९९६ मा बर्डफ्लु (एचफाइभएनवन) भाइरस पत्ता लागेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार यो भाइरसबाट सन् २००३ यता विश्वभर आठ सय ६० मानिस संक्रमित भएकोमा चार सय ५४ को ज्यान गएको छ । सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार पक्षीमा मात्रै देखिने यो भाइरस वेलावेला मानिसमा सर्ने गर्छ । तर, मानिसबाट मानिसमा भने हालसम्म नसरेको…